I-imeyile ayigqibi? Yongeza irekhodi le-SPF! | Martech Zone
NgoLwesithathu, Aprili 30, 2008 NgoLwesihlanu, ngoJuni 19, 2015 Douglas Karr
Ndisandula ukufudusa i-imeyile yenkampani yam yaya kuyo Izicelo zikaGoogle. Ukuza kuthi ga ngoku, siyayithanda inkululeko esiyinikwayo. Phambi kokuba sibe kuGoogle, kwakudingeka ukuba sibeke izicelo kulo naluphi na utshintsho, uluhlu lwezongezo, njlnjl. Ngoku sinokuyisebenzisa yonke into ngokujonga okulula kukaGoogle.
Isiphoso esinye esiye sasiqaphela, nangona kunjalo, yayikukuba i-imeyile evela yethu Inkqubo ayenzi ukuba yenzeke us. Ndenze ufundo malunga neengcebiso zikaGoogle Abathumeli be-imeyile ngobuninzi kwaye ngokukhawuleza ndasebenza. Sine-imeyile ephuma kwizicelo ezi-2 esizibambayo, esinye isicelo esenzelwe omnye umntu ukongeza kuMboneleli weNkonzo ye-imeyile.
Eyona nto ndiyicingayo kukuba uGoogle ubamba ngokungacwangciswanga enye ye-imeyile kuba ayinakuqinisekisa umthumeli nge Irekhodi le-SPF. Ngamafutshane, i-SPF yindlela apho ubhalisa khona yonke imimandla yakho, iidilesi ze-IP, njl.njl. Ukuba uthumela i-imeyile ngaphakathi kwirekhodi yesizinda. Oku kuvumela nayiphi na i-ISP ukuba khangela irekhodi lakho kwaye uqinisekise ukuba i-imeyile ivela kumthombo ofanelekileyo.
Ngumbono olungileyo- kwaye andiqinisekanga ukuba kutheni ingeyondlela iphambili yazo zombini ii-imeyile ezikhulu kunye neenkqubo zokuthintela ugaxekile. Ungacinga ukuba wonke umbhalisi wesizinda angayenza inqaku lokwakha iwizard kuyo nabani na ukuba adwelise imithombo ye-imeyile abazakuthumela yona. Wonke umntu kufuneka asebenzise kwaye aqinisekise nge-SPF! Nantsi Inqaku elinzulu malunga ne-SPF kunye nezibonelelo, Enye yazo kukukwazi ukukhusela i-domain yakho ekungabikho kuluhlu lwabadlali abagaxekile zizenza ngathi ukuba nguwe.
ICEBISO: Unako Qinisekisa irekhodi lakho le-SPF ngo-250ok.
Ukubhala irekhodi lakho le-SPF, kuya kufuneka uye kuthi ga ngoku Umncedisi weSPF, isixhobo esikwi-intanethi ukukunceda ubhalele wena irekhodi. Emva koko ukope ngokulula kwaye uncamathisele kuBhaliso lweDomain. Sivuselela iirekhodi zethu njengoko ndibhala le posi!
Okulandelayo kuluhlu lwam kukuphanda Amaqhosha eDomain. Sithathe inyathelo elikhulu ukuya phambili xa sasikhona Imhlophe nge-AOL kunyaka ophelile. Ndiziva ukuba imfazwe ayisoze iphele! Kubi kakhulu eneneni iinkampani ezinesidima ekufuneka zitsibe kuzo zonke ii-hoops ze-SPAM nangoku!
tags: 250okukuhanjiswaIbhokisi lemiyalezoindlalaInkqubo-sikhokelo yomgaqo-nkqubo womthumeliispemuIsihluzi sogaxekilespfirekhodi le-spf
Epreli 30, 2008 ngo-10: 03 PM
Ingxaki nge-SPF kunye ne-ID yoMthumeli ngokuyimfuneko kukuba iphula ukuthunyelwa kwe-imeyile. I-DomainKeys (kunye nomgangatho ngoku obizwa ngokuba yi-DKIM) ngamaza ekamva, ngokubhekiselele kuninzi lwabantu; nangona kunjalo, kunzima kakhulu ukuhambisa kunye nokuqinisekisa.